लुइसियाना WIC | जेपीएमए, इंक
WIC तपाईंलाई स्वागत छ!
WIC एक आमाको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। यो एक विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम हो जुन महिला, शिशुहरू, र बच्चाहरू, र अधिकको लागि डिजाइन गरिएको हो! WIC लाभहरू पाउन सजिलो भयो: नयाँ लुइसियाना eWIC कार्ड र WICShopper अनुप्रयोगले किनमेल सजिलो र अधिक सुविधाजनक बनाउँदछ। शपिंग सल्लाहहरू, व्यञ्जनहरू र अधिक प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईंको परिवारलाई सजिलो र रमाईलो बनाउँदछ।
WIC को बारे थप जान्न, यी भिडियोहरू हेर्नुहोस्!
यो भिडियो YouTube मा हेर्नुहोस्
'EWIC' के हो?
2019 मा, लुइसियाना WIC ले कागज भाउचरबाट नयाँ इलेक्ट्रॉनिक WIC कार्डमा बदल्नुभयो! यसले भुक्तान प्रक्रियालाई अन्य प्रकारका कार्ड-आधारित भुक्तानीहरूसँग समान बनाउँदछ।
कृपया तल भिडियोहरू हेर्नुहोस् र तपाईंको WIC कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् जब EWIC कार्डहरू तपाईंको स्थानीय WIC कार्यालयमा आउँदैछन्!
WIC कार्यालय वा फोन नम्बर कसरी पत्ता लगाउन
लुइसियाना मा 100 WIC कार्यालयहरु मा अधिक छ। तपाईंको नजिकको WIC कार्यालय फेला पार्न:
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्"बटनको नजिकैको क्लिनिक खोज्नका लागि WICShopper अनुप्रयोगमा बटन
WIC पसल कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ
WICShopper - अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (FAQs)
कृपया ध्यान दिनुहोस्: यदि तपाइँ WICShopper अनुप्रयोगको बारेमा प्रश्न पेश गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ईमेल गर्नुहोस् WICShopper@jpma.com
अनुमति - यो वस्तुहरूलाई WIC को लागि अनुमति दिइएको छ। खानाको लागि WIC लाई अनुमति छ भने यो जान्न उत्तम तरिका हो। एक कुरा जान्न हो कि तपाई वस्तु देख्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको WIC खाद्य लाभहरूमा छैन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। WICShopper अनुप्रयोगमा WIC ले लिङ्क सम्म पुग्दछ, यो "अनुमति" सन्देश तपाईंको परिवारको फाइदाहरूमा लागू हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि, एक वर्षको बच्चा सारा दूध हुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको परिवारमा एक वर्षको बच्चा छैन भने, सम्पूर्ण दूध तपाईंको WIC खाद्य लाभको भाग हुनेछैन, र तपाईं चेक स्ट्यान्डमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्नुहुन्न।
WIC वस्तु होइन - यसको अर्थ WIC ले यस वस्तुलाई स्वीकृत गरेको छैन। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यस खानालाई WIC खाद्य फायदाहरूसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ "मलाई यो खरीद गर्न सकेन!" [HC (3] यो अनुप्रयोगमा अवस्थित प्रयोग गरेर।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब एपले बारकोड पढ्न सक्दैन। यदि कुनै पनि कारणको लागि, अनुप्रयोगको लागि बारकोड पढ्न कठिन छ यो सन्देश पाउनुहुनेछ। तपाईँले बारकोड अन्तर्गत स्थित 12-अङ्कको UPC नम्बर प्रविष्ट गर्न अनुप्रयोगमा, अनुप्रयोगमा कुञ्जी यूपीसी प्रविष्ट गर्नुहोस्, बटन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
A: "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"तपाईंलाई WIC लाई बताउनुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो WIC खाद्य लाभहरू संग किन्नको लागि खाना खाने वस्तु जाँच चेकमा अस्वीकार गरिएको छ। जब तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, "मैले यो खरीद गर्न सकेन" WICShopper अनुप्रयोगमा, हामी राज्य WIC कार्यालयमा नोटिस पाउनेछौ। हामी तपाईलाई बताउने सबै चीजहरूको समीक्षा गर्दछौं र भन्डारहरूको साथ काम तपाईलाई उपलब्ध छनौट उपलब्ध गराउनको लागि!
Q: यदि मलाई लाग्छ कि म एक WIC खाना खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्दछ र म तपाईंलाई भन्छु, मेरो खाना वस्तु थपिएको थियो भने मलाई थाहा छ?
A: तपाईं आफ्नो अर्को भ्रमणमा वस्तु स्क्यान गरेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
लुइसियाना WIC स्वीकृत खाद्य सूची